Shenzhen HXS technology Ltd, tọrọ ntọala na 2009, bụ ọkachamara emeputa na-elekwasị anya IML technology ngwaahịa. Anyị na ngwaahịa na-ekpuchi nnukwu ebe tinyere IML ekwentị ikpe, IML ekwentị panel, IML digital ngwaahịa panel, IML home ngwa panel, ọgwụ na ahụ ike na ngwá panel, etc.
The ụlọ ọrụ na-ekpuchi 3000 square mita ebe, emi odude ke Henggang Town, Longgang District nke Shenzhen City, China. Near site Liuyue ọdụ ụgbọ oloko. Adaba njem dị mma maka ahịa ileta anyị factory. Anyị factory ike mezue ihe niile na nkà na ụzụ usoro na anyị na ngwaahịa onwe ha. Mmepụta Gụnye ịkpụzi ngalaba, bipụtara ngalaba, akpụ ngalaba, ọgwụ ngalaba, nnyocha department.our ọrụ fọrọ nke nta ka 300 ndị mmadụ. na-nwere ihe ndị magburu onwe management na teknuzu talent.
Ugbu a, anyị na-ọtụtụ ama na ụlọ ọrụ ndị na-okwu nkwado ibe, dị otú ahụ dị ka LG, OPPO, BYD, incase, TTPOD, LAWA, Kate spade, etc.
"Nye nke kacha mma mma na ihe ngwaahịa ahịa anyị" bụ ihe kacha anyị lekwasịrị na ka esi ọnwụ ime ihe nile time.Welcome ileta anyị ụlọ ọrụ ma na-eme ka a ogologo imekọ ihe ọnụ na mmeri mmeri n'ọdịnihu.